Ever November: တရုတ်အစိုးရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ မျက်မမြင်တက်ကြွသူ တိုက်တွန်း
Ever November | 12/03/2012 12:22:00 PM | နိုင်ငံတကာသတင်း
တရုတ် မျက်မမြင် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ချန်ဂွမ်ချမ်း (Chen Guangchen)။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ ပြီးတဲ့နောက် အခုအခါ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ တရုတ်မျက်မမြင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ချန်ဂွမ်ချမ်း က ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အကြိုအဖြစ် တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုက်တွန်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ရှိနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရှေ့လထဲ သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူတော့မယ့် ရှီကျင်းပင် အနေနဲ့ ဒီအခြေအနေတွေကို တားဆီး နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေတယ်လို့ နယူးယောက်မြို့မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းထဲမှာ သတိပေးလိုက်တာပါ။
“ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က မသမာသူ တယောက် ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကို တရားနဲ့အညီ ဘယ်လို အုပ်ချုပ်မှာလဲ? မစ္စတာ ရှီကျင်းပင်း ခင်ဗျား၊ တိုင်းပြည်က ခင်ဗျားကို စောင့်ကြည့်နေ ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လူထုနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံက တောင်းဆိုတာကို လိုက်နာသည်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ အာဏာကိုပဲ ဆက်ထိန်းထား ထိန်းထား၊ တရုတ်ပြည် အနေနဲ့ကတော့ အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ နေရာမှာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ ဖြစ်မလား၊ အကြမ်းပတမ်း ဖြစ်မလား ဆိုတာပါပဲ။”
တချိန်တည်းမှာ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ တိုးမြှင့်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာတွေကို မျက်ကွယ်ပြုနေတယ် ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်း တရုတ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ချန်ဂွမ်ချမ်း က ဝေဖန်သွားပါတယ်။ ပြည်ပကို ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက် တူဖြစ်သူကို အာဏာပိုင်တွေက ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် စီရင် ခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာလည်း လက်တုံ့ပြန် အရေးယူတဲ့ လုပ်ရပ်တခု အဖြစ်နဲ့ သူက ပြစ်တင် ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီလိုပဲ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အများအပြား ဆက်လက် ဖမ်းဆီးခံနေရတာတွေ အဆုံးသတ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
“အခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လည်း လွတ်မြောက်လာပါပြီ။ လူရှား၊ ဟူးဂျား၊ ၀မ် လီဟောင်၊ ဂျန် တီယန်ယောင်နဲ့ တခြားသူတွေ ဘယ်တော့မှ လွတ်လာကြမှာပါလဲ? ဦးသိန်းစိန် က သူ့ကို အတိုက်အခံ လုပ်သူတွေကို လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂေါင် ဇီရှန်း၊ လူရှောင်ဘို၊ ဂေါင် ကွမ်း၊ ယန် တီယန်ရှုး၊ နီယူလန်း၊ ၀ီဂါခရစ်ယာန် အလီမူဂျန် နဲ့ ကျီချောင်ဝှေး တို့လို ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူတွေ ဘယ်အချိန်မှာ လွတ်မြောက်ကြမှာပါလဲ? ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြောင့် လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု ရခဲ့သလို၊ နိုင်ငံတကာကလည်း အသိအမှတ်ပြုတာ ခံရပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် တောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စကို မစ္စတာ ရှီကျင်းပင် မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ မလုပ်နိုင်တာထက် မလုပ်တာ ဆိုတာက ရှင်းပါတယ်။”
တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးအတွက် ကိုယ်တိုင် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့နဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိဖို့ လိုတယ်လို့ ချန်ဂွမ်ချမ်း က တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ မျက်မမြင် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ရှေ့နေ ချန်ဂွမ်ချမ်း ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရာက ဧပြီလထဲ ထွက်ပြေးပြီး အမေရိကန် သံရုံးမှာ ခိုလှုံခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကြား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီး ပြည်ပကို ထွက်ခွာခွင့် ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ever November at 12/03/2012 12:22:00 PM
ပြောင်းရွှေ့ရန် ငြင်းဆန်နေသော လမ်းလယ်ကောင်က ငါးထပ်တ...
ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင် ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် စစ်ဘက်အရာရှ...
အာဖဂန်ရှိ အမေရိကန်လေတပ်စစ်အခြေစိုက်စခန်း တာလီဘန်မျ...
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၌ ခြောက်နှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၂၅၀၀၀ေ...
လက်ပန်းတောင်းတောင်အရေး ဆန္ဒပြသူနှစ်ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီး...